Silvia Romano: Mala soo furtay, mise Madax furasho ayaa la bixiyay ? (Doorka Qatar + Howsha Sadexda Sirdoon) - Jowhar Somali Leader
Home Somali Silvia Romano: Mala soo furtay, mise Madax furasho ayaa la bixiyay ?...
Silvia Romano: Mala soo furtay, mise Madax furasho ayaa la bixiyay ? (Doorka Qatar + Howsha Sadexda Sirdoon)
Mugdi badan ayaa hareeyay qaabka lagu sii daayey haweeneyda Talyaaniga ah ee Silvia Romano oo muddo laba sano ku dhow lagu heystay Koonfurta Soomaliya, kadib markii laga soo afduubtay gudaha Kenya.
Markii ugu horeeyay waxaa warka sii deyntiisa shaaciyey Ra’iisal wasaaraha Talyaaniga Guisseppe Conte, isagoo uga mahadceliyey Sirdoonka Talyaaniga ee dibadda qaabilsan, laakiin markaas kadib waxaa soo baxay inay howshu ahayd mid ay ka wada shaqeeyeen saddexda sirdoon ee Somalia (NISA), Turkiga (MIT) iyo Talyaaniga (SISMI), waxaana kaalin uu weyn lahayd Qatar.
Wakaalada wararka Turkiga oo soo xigatay ilo Amni ah ayaa qortay in Sirdoonka Turkiga ay ka qeyb qaateen badbaadinta haweeneyda Talyaaniga ee Silvia Constanza Romano, iyadoo aan faafhaahin ka bixin sida arrintaasi ku dhacday.
Warbaahinta Talyaaniga oo si weyn u faaqiday sii deynta Silvia Romano iyo sida ay diinta islaamka ku qaadatay ayaa dhinaca kale sheegtay in la bixiyey lacag madax-furasho ah oo 2 ilaa 4 Milyan oo Euro loo bixiyey madax furasho si loo sii daayo, waxaana warkan qoray wargeyska Corriere della Sera.
Wargeyska LaRepublica ayaa isna qoray in Sirdoonka Soomaaliya ee NISA iyo agaasimaheeda Fahad Yaasiin ay ka shaqeeyeen sii deynta Haweeneyda Talyaaniga ah iyo la xiriirka kooxda heysatay, waxaana markii danbe la keenay Beerta Mire Indha-yare ee degmada Afgooye si loogula kala wareego.
Sirdoonka Turkiga ayuu sheegay Wargeyska inuu ahaa damaanad qaade si howshu nabadgelyo ugu dhammaato, waxaana si weyn u doonayey in Silvia Romano lasii daayo Madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo, maadaama uu afduubkeeda dhacay xilli uu socdaal ku joogay dalka Talyaaniga.
Corriere della Sera ayaa mar kale qortay in dowladda Qatar ay qeyb weyn ka qaadatay sii deynta Siliva Romano, iyadoo dalkaasi caan ku yahay inuu xiriiro la sameeyo ururrada islaamiga ah iyo inuu madax furasho u siiyo lacago fara badan oo Malaayiin Doolar ah.
Afduubkii Silvia Romano wuxuu dhammaaday 5-tii May 2020, markii la bixiyey lacagta madax furashada ah, iyadoo uu xilligaasi ay u sheegeen raggii afduubka ku heystay in la sii deynayo, waxaana la siiyey dharkii ay ku safri lahayd, iyadoo saacad kadib lagu soo qaaday Cagaf muddo saddex maalmood ah, kadibna la geeyay goobtii lagu ballamay ee lagu sii deyn lahaa oo ciidamo kale ku sugayeen Afgooye.